Ụdị Onye Chineke Bụ | Ihe Baịbụl Kwuru
Chineke ọ̀ dị ka anyị?
“Chineke bụ Mmụọ.”—Jọn 4:24.
Baịbụl kwuru na Chineke bụ mmụọ. (2 Ndị Kọrịnt 3:17) N’ihi ya, ọ ka anyị. Anyị agaghị ahụli ya anya. 1 Timoti 1:17 kwuru na ọ bụ “Eze mgbe ebighị ebi, onye a na-apụghị ibibi ebibi, onye a na-apụghị ịhụ anya.” Baịbụl kwukwara na “ọ dịghị mgbe onye ọ bụla hụtụworo Chineke.”—1 Jọn 4:12.
Chineke abụghị mmadụ. N’ihi ya, anyị agaghị ekwuli otú ọ dị. Aịzaya 40:18 kwuru, sị: “Ònye ka unu pụrụ iji Chineke tụnyere, oleekwa ihe unu pụrụ ịsị na o yiri?” Ihe niile dị n’eluigwe dị egwu. Ma, a gaghị eji ha tụnyere Chineke.—Aịzaya 40:22, 26.
Ma, e nwere ndị nọ n’eluigwe. Ha na-ahụ Chineke anya, na-agwakwa ya okwu n’ihi na ha bụkwa mmụọ. (1 Ndị Eze 22:21; Ndị Hibru 1:7) A na-akpọ ha ndị mmụọ ozi. Jizọs Kraịst kwuru banyere ha, sị: “[Ha] na-ahụ ihu Nna m nke bi n’eluigwe mgbe niile.”—Matiu 18:10.
“Ya mere, kpeenụ ekpere otú a: ‘Nna anyị nke bi n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ.’”—Matiu 6:9.
Baịbụl ekwughị na Chineke nọ n’ebe niile. Kama ihe Jizọs kwuru na Matiu 6:9 na 18:10 gosiri na Chineke nwere ahụ́. Ọ bụ “Nna,” birikwa n’eluigwe. Ebe ahụ bụ ‘ebe obibi ya guzosiri ike.’—1 Ndị Eze 8:43.
Mgbe ọ fọrọ obere ka Jizọs jechaa ozi o kwo bịa n’ụwa, o kwuru, sị: “Ana m ahapụkwa ụwa, ana m alakwuru Nna m.” (Jọn 16:28) Mgbe ọ nwụrụ, Chineke kpọlitere ya n’ọnwụ, ya aghọọ mmụọ. “Ọ banyere n’ime eluigwe, ka o wee pụta ugbu a n’ihu Chineke n’onwe ya maka anyị.”—Ndị Hibru 9:24.
Gịnị mere anyị kwesịrị iji chebara ihe ndị a anyị kwuru echiche? Ebe ọ bụ na Chineke dị, anyị nwere ike ịmụ gbasara ya, bịaruokwa ya nso. (Jems 4:8) Ihe ọzọ bụ na anyị mata nke bụ́ eziokwu gbasara Chineke, ọ ga-enyere anyị aka ife ya otú ọ chọrọ. Anyị agaghị eji ihe ndị a kpụrụ akpụ na-efe ya. 1 Jọn 5:21 kwuru, sị: “Ụmụntakịrị, kpacharanụ anya ka unu ghara ikpere arụsị.”
Olee otú o si bụrụ na Chineke kere anyị n’onyinyo ya?
“Chineke wee kee mmadụ n’onyinyo ya, ọ bụ n’onyinyo Chineke ka o kere ya; nwoke na nwaanyị ka o kere ha.”—Jenesis 1:27.
Anyị nwere ike ịmụta àgwà Chineke. Dị ka ihe atụ, anyị nwere ike ịmụta ịhụnanya na ikpe ziri ezi n’aka ya. Anyị nwekwara ike inwe amamihe. Baịbụl kwuru, sị: “Ghọọnụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n’anya, na-ejekwanụ ije n’ịhụnanya.”—Ndị Efesọs 5:1, 2.
Chineke kekwara anyị ka anyị jiri aka anyị na-ekpebi ihe anyị ga-eme. Nke a na-enyere anyị aka ime ihe dị mma kama ime ihe ọjọọ. Ọ na-enyekwara anyị aka ịhụ ndị ọzọ n’anya. (1 Ndị Kọrịnt 13:4-7) Ihe ọzọ bụ na anyị nwere ike iji ọgụgụ isi anyị rụpụta ihe. Anyị hụkwa ihe ndị mara mma Chineke kere, obi na-adị anyị ụtọ, anyị ana-etokwa ya. Chineke kere anyị ka anyị na-efe ya, na-emekwa ihe ọ chọrọ.—Matiu 5:3.
Otú ihe Baịbụl kwuru nwere ike isi baara anyị uru. Ọ bụrụ na anyị ana-amụ gbasara Chineke ma na-eme ka ya, ọ ga-enyere anyị aka ịna-ebi ndụ dị mma. Nke a ga-eme ka obi na-atọkwu anyị ụtọ, ahụ́ eruokwa anyị ala. (Aịzaya 48:17, 18) Chineke ma na àgwà ya na-atọ anyị ụtọ. Àgwà ya na-eme ka ya na ndị chọrọ ịmụta banyere ya dịrị ná mma, bụ́kwanụ nke ga-eme ka ha dịrị ndụ ebighị ebi.—Jọn 6:44; 17:3.
Ihe Baịbụl Kwuru Banyere Ụdị Onye Chineke Bụ
mailto:?body=Ihe Baịbụl Kwuru Banyere Ụdị Onye Chineke Bụ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102013167%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Baịbụl Kwuru Banyere Ụdị Onye Chineke Bụ